Norway: Waxaan Soomaaliya ku caawineynaa deyn dhan 3,1 bilyan NOK. - NorSom News
Norway: Waxaan Soomaaliya ku caawineynaa deyn dhan 3,1 bilyan NOK.
War saxaafadeed rasmi ah ah oo maanta kasoo baxay wasaarada arrimaha dibadda dowlada Norway, ayaa lagu sheegay in Norway ay Soomaaliya siin doonto deyn gaareyso 3,1 bilyan oo lacagta Norwey ah, una dhiganta 353 milyan $.
Deynta Soomaaliya looga leeyahay caalamka ayaa guud ahaan isku dar gaareyso 4,7 bilyan oo dollar. Waxeyna Soomaaliya dhowrkii sano ee ugu danbeeyay dadaal xoogan ugu jirtay in loo sameeyo deyn cafin, si ay ugu furmaan suuqyada maaliyeed ee caalamka, una hesho maalgalin iyo dib usoo kabasho dhaqaale. Soomaaliya ayaa hada kasoo gudubtay sadex kamid ah afartii imtixaan ee shuruuda looga dhigay, si deynta lagu leeyahay looga cafiyo.
Sadex meelood meel kamid ah(1/3) deynta Soomaaliya lagu leeyahay, ayaa waxaa iska leh hey´addaha maaliyadeed ee aduunka, gaar ahaana Bankiyada horumarinta dalalka, hey´adda lacagta (IMF) iyo Bankiga Aduunka. Si Soomaaliya ay ugu suurtagasho barnaamijka deyn cafinta, waxaa waajib aheyd in marka hore la bixiyo lacagaha deymaha ah ee Soomaaliya ay ku leeyihiin hey´addahaas.
Previous article(Xog): Muxuu salka ku hayaa khilaafka sababay in masaajidka Towfiiq laga goosto taageerada dhaqaale ee dowlada.
Next articleOslo: Wiilal walaalo soomaali ah oo ku eedeysan labo isku day dil.